Unicode 12.0 dia mitondra emoji vaovao marobe | Famoronana an-tserasera
Ireo no emoji vaovao tonga amin'ny fanavaozana Unicode 2019
Iza no nieritreritra an'izany Tena liana amin'ny hahafantatra ireo emoji vaovao ireo izahay izany dia ho tonga amin'ny taona 2019. Ny antony lehibe indrindra dia ny nahatonga azy ireo ho fomba tsara indrindra hanehoana ny fihetsem-pontsika amin'ireo chat izay ananantsika amin'ny fampiharana toa ny WhatsApp na Messenger.
Nanambara i Unicode Consortium ny lisitra farany emojiis vaovao 230 ary izany dia hahatratra ireo sehatra lehibe amin'ny faran'ity taona ity. Ireo emojiis vaovao dia manana tanjona ny hisolo tena olona marobe manana fahasembanana, ary koa maro hafa izay hasehonay anao.
Tafiditra ao anatin'io lisitr'ireo emoji vaovao 230 io amin'ny karazana fifandraisana am-pitiavana sy loko maro karazana amin'ny hoditra. Fanavaozana izay tsy te hamela olona any aoriany noho ny maha-lahy na maha-vavy azy ary misokatra ho an'ny olona rehetra eto amin'ity planeta ity.
Ny fanavaozana dia Unicode 12.0 ary io no famoahana lehibe fahenina mandraka ankehitriny. Sary andiana sary maneho ny karazana fihetsem-po sy ny olona misaotra an'i fanitarana finday avo lenta nahavita nanao mpampiasa an-jatony an-tapitrisany mahita azy ireo ho zava-dehibe amin'ny andavan'andro.
Ankehitriny tsy azonao ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny chat raha tsy misy ireto emojis ireto ary tato anatin'izay taona izay dia navaozina tamina karazan-karazany marobe izy ireo ka tsy nisy olona tavela. Ao amin'ny fanavaozana nambara Androany dia misy emojiis 59 vaovao isam-batan'olona, fa misy fiovana 171 amin'ny lahy sy ny vavy ary ny hoditra.
Ka amin'ny ankapobeny dia afaka misafidy isika eo amin'ny safidy samihafa 230. Izahay dia manana sary ahafahanao mankafy ny tsirairay amin'ireo emojis ireo sy ny sasany amin'ireo solontenan'io kinova Unicode 12.0 io izay hahatratra ireo fampiharana, sehatra ary rafitra fiasa samihafa mandritra ny taona. Volana vitsivitsy lasa izay fa tsy naneho vaovao mifandraika izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Ireo no emoji vaovao tonga amin'ny fanavaozana Unicode 2019
Fomba roa hampiharana ny firafitra amin'ny volavolanay ao amin'ny Adobe Photoshop
Andramo ny haavon'ny fahalalanao momba UI amin'ity lalao an-tserasera ity